I-FlyArystan: I-1.5 yezigidi zabakhweli ngo-2020
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-FlyArystan: I-1.5 yezigidi zabakhweli ngo-2020
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseKazakhstan • iindaba • Tourism • uthutho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ukusukela ukusebenza kwayo kwaqala ngoMeyi 2019, iFlyArystan iqhube ngaphezulu kwe-2.2 yezigidi zabakhweli
I-FlyArystan, inqwelo moya ebiza ixabiso eliphantsi eKazakhstan, ibithwele abakhweli abayi-1.5 yezigidi ngonyaka ka 2020. Ngokuchasene nemeko yokudodobala kwezoqoqosho kwihlabathi liphela, iFlyArystan iqhubekile nokuhambisa ukukhula okumileyo, ngelixa ihlangabezana namabhongo ayo okubonelela ngexabiso eliphantsi kwimakethi yaseKazakhstan. Ukusukela ukusebenza kwayo kwaqala ngoMeyi 2019, iFlyArystan ibithwele abagibeli abangaphezulu kwezigidi eziyi-2.2 kwaye ilindele ukuthwala abagibeli abangaphezu kwe-3m ngo-2021.
Isiganeko esibalulekileyo sabakhweli abazizigidi eziyi-1.5 abathwelwe yi-LCC yaseKazakhstan kuphela yafezekiswa kwiinyanga ezili-10 zokuhamba ngenqwelomoya ngenxa yeenyanga ezimbini zokunqunyanyiswa kwenqwelomoya ngenxa yobhubhane we-COVID-19. Ngaphezulu kwesiqingatha sezihlalo ezithengisiweyo ngamaxabiso angaphantsi kwe-10,000 24 Tenge (iUS $ 85) ngenqwelomoya eya kwicala elinye. Umndilili wefakhalthi ngexesha lonyaka ungaphezulu kwe-90%, ngelixa ukusebenza ngexesha kungaphezulu kwe-28%. I-FlyArystan yandise ubalo lwendawo yayo kwaye ngoku isebenza ngeendlela ezingama-14 ukuya kwizixeko ezili-XNUMX zaseKazakhstan.
In 2020, IFlyArystan inyuse inani leenqwelomoya kwinqwelomoya ukusuka kwiiAirbus A320s ngeyoMqungu ukuya kwezisixhenxe ngoDisemba. I-FlyArystan izakuthatha ezinye iinqwelomoya ezintathu kwisiqingatha sokuqala sika-2021 ukukhulisa iinqwelo ukuya kwi-10 A320s. Ukongeza kwiindlela ezikhoyo ezivela kwiziseko eAlmaty, eNur-Sultan naseAtyrau, iFlyArystan ityale imali kuphuhliso lweenqwelomoya zommandla. Ke, ngo-2021, iFlyArystan iceba ukusungula iindlela ezintsha ukusuka eShymkent naseAktau.
Kwi-2021, iFlyArystan iya kwakhela kuhlumo lwayo olunomtsalane ngokusungula ngaphezulu kweendlela ezili-14, iqhubeke ukunciphisa iindleko kunye nokuhambisa ishishini elikhokela ukusebenza ngexesha. Impumelelo emangalisayo evela kwinkampani yeenqwelo moya ebisebenza ngaphantsi kweminyaka emi-2.